‘३ जनासँग सुतेकी थिएँ’, यो संख्या बढाउन युवतीले पत्ता लगाइन् अनौठो उपाय, थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/‘३ जनासँग सुतेकी थिएँ’, यो संख्या बढाउन युवतीले पत्ता लगाइन् अनौठो उपाय, थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ !
नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न मानिसहरु आ–आफ्नै तयारीमा लागेका छन् । ओन्ली फ्यानकी एक मोडलले पनि नयाँ वर्षको लागि आफूले सोचेको कुरा साझा गरिन्। उनले भनिन् कि म नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा से’क्स पा’र्टी आयोजना गर्दैछु। म २०२२ लाई धमाका साथ सुरु गर्न चाहन्छु। मोडल एमी कुप्सले कोरोना महामारीमा घरमै समय बिताएको बताइन् । रमाइलो भएन अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनाकी ३२ वर्षीया एमीले होटल सुइट बुक गरेकी छिन् । यहाँ उनले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा केही चुनिएका साथीहरूलाई आमन्त्रित गरिरहेकी छिन् र उनीहरूसँग रमाइलो गर्ने योजनामा छिन्।
यस वर्षको सुरुमा ओन्ली फ्यान्स स्टारले आफ्नो जीवनमा तीन पुरुषसँग मात्र सु’ते’को बताइन्। तर धेरै मान्छे संग सुत्न चाहन्छु। यससँगै उनी आफ्नो सम्बन्धको चाहनालाई पनि रोक्न चाहन्निन । एमीको ८४५०० इन्स्टाग्राम फलोअर्स छन्। उनले कोभिड–१९ र लकडाउनले मेरो जीवनमा नराम्रो प्रभाव पारेको बताईंन । अब म मेरो हराएको समय फिर्ता गर्न चाहन्छु। यो लकडाउनको समयमा डे’ट ग’र्न र से’क्स ग’र्न गा’ह्रो थियो। विशेष गरी आफ्नो पूर्व संग ब्रेकअप पछि।
उनले भनिन्, ‘मैले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न से’क्स पा’र्टी’को आयोजना गरेको छु । मलाई लाग्छ कि म मेरो संख्या बढाउन से’क्स पा’र्टीको मद्दत लिन सक्छु। म पार्टीमा पुरुष र महिलालाई आमन्त्रित गर्नेछु। यसका लागि मैले एउटा राम्रो होटल सुइट भाडामा लिएको छु। मेरो पाहुनाको सूचीमा को–को हुनेछन् भन्ने निर्णय भएको छैन । तर एउटा कुरा साँचो हो कि म यसअघि कहिल्यै यति सेक्सिस्ट थिइनँ। एमी भन्छिन् कि स्कूलले उनको ओन्ली फ्यान साइड गिगको बारेमा थाहा पाएपछि उनलाई स्कूलबाट निकालिएको थियो।
गैंडाकोटवाट फेरी कहाँ लगियो अभिनेता पल शाहलाई ?
मेरिकी सेना सहित भारतको लखनउबाट काठमाडौं छिर्यो सेनाको ठूलो जहाज